Inkonzo - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Iinkonzo zangaphambi kokuthengisa: bonelela uyilo lweprojekthi, uyilo lwenkqubo, ukucwangciswa kwezixhobo ezifanelekileyo, ngokweemfuno zakho ezizodwa, uyilo kunye nokwenza iimveliso, ukuqeqesha abaqhubi bezobugcisa bakho.
Inkonzo yentengiso: kukukhapha ukugqibezela ukwamkelwa kwezixhobo, ukunceda ekuyileni isicwangciso sokwakha kunye nenkqubo eneenkcukacha.
Inkonzo yasemva kokuthengisa: inokubonelela ngesikhokelo sendawo yokufakelwa kwezixhobo, ukulungisa ingxaki kwindawo kunye noqeqesho lwabasebenzi.
Ubume bendalo kunye nophuhliso oluzinzileyo
I-YiZheng Heavy Machinery Co, Ltd.ingcali yezixhobo zemveliso yezichumiso kunye nezixhobo zemveliso yezichumiso. Naphi na apho ikhoyo, inkampani yenza "ukuhlonipha amaxabiso entlalo kunye namasiko" umthetho wayo wokuqala.
Ngelixa siqhuba ishishini lehlabathi kwaye silandela ukukhula kwenzuzo, uYizheng uhlala ebeka ukhuselo lokusingqongileyo kwindawo yokuqala kwaye basebenze kunye kuphuhliso oluzinzileyo loqoqosho lwehlabathi.
Siza kuyiphatha ngesisa kude kuye esiphelweni
Ngoluvo olomeleleyo loxanduva kwezentlalo, u-Yizheng uthatha ububele njengenye yeenjongo zeshishini. Izenzo zokunikela ngezikolo kunye nokunceda amahlwempu konke kubalisa ibali likaYizheng.
Ukusukela ngo-2010, u-Yizheng unikele ngesikolo kubantwana abangaphezulu kwama-20 kwiilali ezimbini zaseAfrika, ukongeza ekunikezeleni ngemali ngonyaka ukuxhasa iintsapho zabo.
Kwixesha elizayo, inkampani yethu inokuzimisela nokuzithemba, ngombono wezenzululwazi, ijongane nenettle, izabalazele ukugqwesa, thina ngenkonzo enengqiqo, itekhnoloji egqwesileyo kunye neemveliso ezisemgangathweni ukufuna ukusebenzisana ngokuphumelela.
Sibamkela ngezandla ezishushu nonke ukuba nindwendwele apha ukuze nikhangele amathuba angakumbi okusebenzisana.